Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Midowday ee Isku-xidhka Glu ee Nidaamka Qalajinta Qalajinta 450ml
Nooca Epoxy-ka nooca duritaanka beerista xabagta waa labo-qaybood oo xoog-isku-dhafan oo isku-dhafan oo loo yaqaan 'epoxy resin mortar', oo loo isticmaalo gaar ah beerida qoriga xabagta iyo fiicni.
Waxyaabaha: Dheecaan Epoxy
Magaca Badeecada: Isku xirayaasha Dhismayaasha Kiimikada Dhismeheeda
Barroosinka kiimikada waxaa loo isticmaali karaa barroosinka oo shubka iyo derbiga dibedda qaybaha dhismaha. Habka wax lagu xidho waa nooca xabagta. Tuubbooyin u dhigma ayaa la bixiyaa.
Daaweynta dusha sare: qabow galvanized (dhumucda lakabka zinc ≥ 5um);
304,316 Bir daxal laheyn uma baahna daaweyn dusha sare ah.
Barroosinka kiimikada waxaa loo isticmaali karaa in lagu xiro qaybaha dhismaha qaabdhismeedka darbiga la taaban karo. Habka wax lagu xidho waa nooca xabagta. Tuubbooyin u dhigma ayaa la bixiyaa.
304 316 ahama birta birta ahama ee balaadhinta balaadhinta Qiimaha ugu fiican
Boodhadhka xargaha, oo sidoo kale loo yaqaan geckos dayactirka baabuurta, waxay leeyihiin adeegsiyo kala duwan, oo ka bilaabma qalabka farsamada ilaa buundooyinka dhisidda. Sababtoo ah qaaska ah ee qaabdhismeedkeeda, rakibidda boodhadhka 'wedge bolts' way ka duwan yihiin boodhadhka kale ee barroosinka, sidaa darteed layaab ma leh in farqi weyn u dhexeeyo siligga iyo iska caabbinta xiiridda.
bir bir bir ah oo birta ah oo birta ah oo birta loogu xiro nidaamka hagaajinta dhagaxyada
Dhagaxa adag ee dabiiciga ah (dhumucda d≥25mm), dhagax jilicsan (dhumucda d≥30mm). Lagu dabaqi karo taarikada isku dhafan ee isku dhafan iyo isku-xidhka taarikada soo-baxayaasha iyo taarikada skle.